Xildhibaan Axmed Macalin Fiqi oo ka hadlay weerarkii degaanka Bariire ee gobolka Sh/ Hoose – SHABAKADA HIIRAAN XOG
HomeWararka SoomaaliaXildhibaan Axmed Macalin Fiqi oo ka hadlay weerarkii degaanka Bariire ee gobolka Sh/ Hoose
Hiiraan Xog, Sep 29, 2017:- Xildhibaanada Axmed Macalin Fiqi oo kamid ah Xildhibaanada Baarlamaanka Soomaaliya ee Magaalada Cadaado u tagay inay badbaadiyaan Maamulka Galmudug ayaa bartiisa Facebook soo dhigay qoraal uu kaga hadlayo dagaalkii Maanta lagu soo qaaday Ciidamada Dowladda ee fariisimaha ku lahaa Deegaanka Bariire.
Wuxuu sheegay Fiqi in Ciidamadii lagu soo weeraray Bariire ay waayeen muddo 5 saac ah wax gurmad mudadaasna ay ku jireen dagaal.
Fiqi ayaa dowladda Soomaaliya ku eedeeyey inay dayacyday Ciidamada dowladda taas badalkeedana ay ku mashquushay Maamul Goboleedyada dalka ka jiro.
Fiqi ayaa sheegay inuu tacsi ka dirayo dhimashadii soo gaartay Ciidamada dowladda ee saakay Aroortii lagu weeraray deegaanka Bariire.
Waxaan ka tacsiyeynayaa khasaaaraha isugu jira dhimashada iyo dhaawaca ee ka soo gaaray ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee fariisinka ku lahaa Bariire oo ay weerareen kooxaha argagixisada ah saakay aroortii hore.
Waxaa na soo gaaraya in ciidankaas oo dagaalmaayay muddo ku dhow 5 saacadood aan wax gurmad ah loo fidin, taasoo ayaandarro weyn noqonaysa iyo niyadjab ku yimaada ciidamada qalabsida.
Madaxdii dawladdu waxey ku mashquulsan yihiin weeraridda maamul goboleedyada, halka alshabaabna uu fulinayo weeraro ka dhan ah ciidamada dawladda iyo dadka Soomaaliyeed, waxaa qabaa in dalku uusan sidaan ku sii soconayn.